10 malunga nevidiyo yengxoxo ..
Unxibelelwano yenye yeemfuno eziphambili zomntu wale mihla. Kodwa usuku lokusebenza lucwangciswe ngendlela yokuba uninzi lwethu lunokuthetha nje kanjalo, sithethe ngale nto kuphela ngokuhlwa, emva komsebenzi. Kukho ubunzima ekukhetheni i-interlocutor. Emva kwayo yonke into, kuya kufuneka uphume endlwini kwenye indawo. Kwaye ngomso kwakhona ukusebenzela okanye ukufunda. Kwaye ngoku ingxaki yokunxibelelana ijongene nomntu wale mihla: Ndifuna, ngokwenene ndifuna ukufumana umntu oza kungenisa onokuthi "axambulisane" ngobomi, ukrokre umntu, adumise umntu, axoxe ngeefilimu ezintsha okanye ifilimu ephezulu kakhulu. Kodwa kwangaxeshanye akukho xesha konke konke ukuba ushiye indlu kwaye uzulazule kwenye indawo ngenjongo yokuthetha nje. Kwaye ngoku kubonakala ngathi akukho ndlela yokuphuma. Kodwa musa ukuphelelwa lithemba. Ndiyabulela kwiindlela zangoku kunye ne-Intanethi yonk 'indawo, wonke umntu namhlanje unokufumana i-interlocutor yabo efanelekileyo kwi-Intanethi. Inethiwekhi inezixhobo ezininzi zonxibelelwano kangangokuba umntu wale mihla akadingi nokucinga malunga nokuphuma ekhaya. Ndifuna ukuthetha ngevidiyo. Okanye, phendula imibuzo eli-10 idumileyo malunga nengxoxo yevidiyo. Ke ngoko, masihambe:
1. Yintoni VIDEOCHAT? I-
Incoko yevidiyo namhlanje isisixhobo sonxibelelwano phakathi kwabantu abohlukeneyo abavela kumazwe awahlukeneyo. Kukho, ewe, izixhobo ezilungiselelwe ulwimi olunye okanye ilizwe elithile. Kodwa ubukhulu becala, oovimba abazizibonelelo ngezizwe. Apha, abantu banxibelelana besebenzisa ikhamera yevidiyo. Abangeneleli babona kwaye beve nganye nganye, ngoko ke inkqubo yokunxibelelana kakhulu, ifana kakhulu nokuhlangana ngokwenyani. Umahluko kuphela kukuba awunyanzelekanga ukuba uphathe nabani na ngeti 8)
2. Uyintoni umahluko phakathi kweVIDIYO ISAHLUKO kunye neROULETTE ukusuka kwiVATI CHAT elula? I-
Kukho iintlobo ezahlukeneyo kunye neengxoxo zevidiyo. Unokumane ukhethe i-interlocutor kwaye uqalise incoko. Kwaye ungasebenzisa imithombo yevidiyo yengxoxo yevidiyo kwaye wenze unxibelelwano lube lukhulu ngakumbi kuwe. Kwaye nakwisingenisi, nayo. Yintoni egqithisileyo? Into yokuba akukho mntu ukhetha i-interlocutor. Ungeneleli kule ncoko unikezelwa ngengozi. Awunokwazi kwangaphambili kwanto ngalo mntu uza kunxibelelana naye ngexesha elizayo (okanye imizuzu kunye neeyure). Yonke into ihleliwe apha: ukukhethwa komnxibelelanisi, ixesha lonxibelelwano, ulwimi lonxibelelwano, izihloko zonxibelelwano kunye nokunye, njalo-njalo. Le yingxoxo yevidiyo roulette enomdla yabantu abaninzi abaya apho bancokola.
I-3. Ngubani onokuba lilungu leNgxoxo yeVidiyo yeRoulette?
Ngapha koko, ubukhulu becala akukho zithintelo. Ewe kunjalo, umntu othatha inxaxheba akanakuba ngumntu ongaphantsi kweminyaka eli-18. Ke ngoko, ukuba umfana okanye intombazana engaphezulu kweminyaka eli-18, ke WELCOME.I-ChattRoulette yale mihla inikezela ngeendlela ezininzi zonxibelelwano. Olu nxibelelwano kwigumbi eliqhelekileyo, kunye nonxibelelwano ngasese, oko kubizwa ngokuba lunxibelelwano lwabucala kunye ne-interlocutor. Ngayiphi na imeko, umthathi-nxaxheba unokubakho ngokupheleleyo nangaphezu kweminyaka eli-18 ubudala. Ngokuqinisekileyo akukho zithintelo kwisini, kwezopolitiko nakwezenkolo, kunye nezinye izithintelo ngaphandle kobudala. Ke, abantu abanomdla ohlukeneyo kunye namanqanaba ophuhliso badibana apha. Kwaye inomdla kakhulu. Ngokukodwa xa usazi ngokuqinisekileyo ukuba ngaphezulu akunakufane ukumbona lo mntu, ngakumbi kubomi bokwenyani.
I-4. Ihlawulwe okanye simahla? I-
Uninzi lwemisebenzi kwincoko yengxoxo yeVidiyo isimahla. Kodwa kukho izibonelelo ezihlawulwayo. Oku, njengommiselo, okongezelekileyo unokukhetha, okanye unokukhetha ukungakwenzi. Ngaphezu koko, ubukhulu becala unxibelelwano lwasimahla lwanele. Ke, makhe sijonge ukuba yeyiphi i-roulette eya kubonelelwa simahla kwincoko yevidiyo, kwaye yintoni ehlawulwa.
Nazi iimpawu zasimahla:
yonxibelelwano kunye ne-interlocutor ye-
ukukwazi ukunqaba ukunxibelelana nomntu othile
ukubakho kokukhetha ulwimi lonxibelelwano kunye ne-interlocutor kwelinye ilizwe okanye isixeko esithile
Nazi izinto ezihlawulweyo:
yongeza umntu ongalunganga kuluhlu lwamaqabane aqhelekileyo onxibelelwano
Ingu-97 007 inguqu yommandla wabucala wonxibelelwano
ifumana iibhonasi ezikhethekileyo kwizixhobo ukuze kuphuculwe umgangatho wonxibelelwano
Ewe kunjalo, kukho amanqaku ongezelelweyo okuba kwividiyo nganye yencoko yevidiyo inokuhluka kancinci. Kodwa ndidwelise iingongoma eziphambili.
I-5. Kuthekani ukuba i-interlocutor ayithandi?
Ngapha koko, namhlanje yonke into yenziwa ngendlela ukuze wonke umtyeleli wevidiyo roulette azive ekhululekile kwaye eqinisekile. Kodwa okwangoku, ayingabo bonke, kude kubo bonke abalingane zonxibelelwano, esingathanda. Yonke into ifana ngokuthe ngqo kubomi bokwenyani. Siyamthanda umntu kwaye siyaqhubeka nokunxibelelana nalo mntu. Kwaye umntu akasifanelanga konke konke, kwaye andifuni ukunxibelelana nalo mntu. Kodwa ukuba kubomi benene kunzima ukwala ukunxibelelana nabantu esingabathandiyo, kulapho kwi-intanethi kulula ngokwaneleyo ukufezekisa oko sikufunayo. Kwaye ukuba ngequbuliso ubungamthandi lomntu uthetha naye, ngoko kakhulu, kulula kakhulu ukuyicima. Oku kunokwenziwa ngeqhosha elinye elibizwa ngokuba "ngokulandelayo." KwisiNgesi, eliqhosha libizwa ngokuba: "ngokulandelayo". Kwanele ukucinezela eli qhosha, kamsinya nje ukuba umntu ozahluleleyo ozahluleleyo anokunikwa unxibelelwano.
Ewe kunjalo, konke oku kulula kwaye kulula. Kodwa kuya kufuneka ulungele ukuba wena, njengomngeneleli, ungacinywa. Kwaye ungatshintshwa nje utshintshwe ngomnye umntu.Kwaye apha awunakwenza nantoni na, enyanisweni. Ke, iqhosha elinye "ngokulandelayo" kunye ne-voila, sele unayo iqabane lonxibelelwano elahlukileyo phambi kwesikrini sekhompyuter.
6. Yintoni "unxibelelwano lwabucala" kwaye ungalufumana njani? I-
Rhoqo i-Chatt Roulette inamagumbi okuxoxa aliqela. Kodwa zimbini eziphambili:
Ngaphantsi kwegumbi eliqhelekileyo libhekisa kuyo yonke indawo yobutyebi. Kwaye apha imigaqo iyafana kumntu wonke. Naluphi na unxibelelwano kwigumbi eliqhelekileyo alunachuku. Kwaye inkqubo yonxibelelwano iyaqhubeka ngqo de omnye wabathathi-nxaxheba kule nkqubo acofe iqhosha "elilandelayo". Nje ukuba eliqhosha licinezelwe (akukhathalekile ukuba ngubani), unxibelelwano luya kupheliswa.
Kodwa kukho umehluko omnandi kumgaqo oqhelekileyo. Ilele kwinto yokuba wonke umntu, ukuba uyathanda, unokufumana ukufikelela kwigumbi labucala. Igumbi labucala yindawo ekhethekileyo nekhuselekileyo yesixhobo seRoulette, xa unxibelelwano luhlala ixesha elide njengoko ufuna kwaye ngexesha elinye okanye ucinezela iqhosha elinye, olu nxibelelwano alunakumiswa. Unxibelelwano lwabucala luthetha kuqala kunxibelelwano lwangasese apho kungekho mntu ungaziwayo unokungena. Olu nxibelelwano, xa unokuhlawula ngaphezulu kunakwigumbi eliqhelekileyo. Kwaye unxibelelwano lwabucala oluhlawulelwa kweyona vidiyo yencoko yevidiyo. Ukuze umeme umnxibelelanisi othile kwindawo yonxibelelwano yangasese, kwanele ukuhlawula olu nxibelelwano kunye ne-voila, igumbi liya kuvulwa kwaye incoko iya kuqhubeka ngaphandle kwezithintelo. Olu hlobo lonxibelelwano lwabucala olunomdla kwisininzi sabatyeleli kwi-vidiyo yencoko yevidiyo.
Ngokuqinisekileyo, ezinye izithintelo zikhona apha, kumda wonxibelelwano lwabucala. Kodwa ubukhulu becala, ezi zithintelo zingafundwa ngaphambi kokuba le ndawo yabucala ihlawulwe.
I-7. Ufuna ukunxibelelana njani kwiRoulette VIDEO CHAT? I-
Unxibelelwano, kwaye (nayiphi na ngaphandle kwe-intanethi) ifuna iindlela nezixhobo ezithile. Ukuba sithetha ngonxibelelwano kwividiyo yencoko yevidiyo, emva koko sidinga iimfuno ezithile zemali. Ngapha koko, phantse wonke umntu wale mihla unokuya ngokulula kwiwebhusayithi yeVidiyo yeRouch kwaye uqalise ukunxibelelana naye nawuphi na umntu ongahleliwe.
Ke, nantsi, ezona mfuno zincinci zezinto ozifunayo ukuze uxoxe nge-ChatRoulette:
ikhompyuter enamandla aneleyo okubamba intlanganiso kwifomathi yevidiyo
imowudi esemagqabini elungileyo
Ngokuyintloko, oku kuko konke okufunekayo ukunxibelelana kwezi zixhobo. Ngokwemvelo, iimfuno zebhobho kunye nekhamera yewebhu kufuneka zigqithiswe. Imakrofoni mayibe esemagqabini.Umbhobho olungileyo luhlobo lweendlela ezibaluleke kakhulu zonxibelelwano eziphumeleleyo.
Ikhamera yewebhu ikwabaluleke kakhulu. Ikhamera yewebhu elungileyo kufuneka iququzelele ukuhanjiswa kwemifanekiso kunye nevidiyo ngaphandle kokuhamba kancinci. Akukho nto kufuneka iphazamise unxibelelwano lwabantu kumacala omabini ekhamera.
Kwaye ngokwemvelo, ikhompyuter ngokwayo kufuneka ibe namandla ngokwaneleyo ukuze kungabikho nto inciphayo. Ke oko akukho nto iphazamisa unxibelelwano.
I-8. Ndingayicwangcisa indlela yokukhangela yokungenelela?
Ividiyo roulette yencoko, okokuqala, yindawo emnandi yokuchitha. Ke ngoko, akukho mfihlo yokuba umntu ngamnye olundwendwe uza apha ngenjongo zokuzonwabisa nokuncokola nabanye abantu abanomdla. Kwaye ukhetho olungenamkhethe lweqabane lonxibelelwano nalo luyonwabisa. Kodwa ngamanye amaxesha ndifuna ukuthetha, nangona kunjalo kunye neqabane elingasebenziyo, kodwa kunye neeparamitha zonxibelelwano. Ke ngoko, abanini kunye nabaphuhlisi bazama kwaye benza konke okusemandleni ukuze undwendwe ngalunye lwevidiyo roulette yengxoxo banxibelelane ngaphandle kweengxaki kungekuphela nje nabani na, kodwa bazi malunga ngubani oza kunikezelwa njengomncedisi. Ubuncinci malunga. Kwizibonelelo ezininzi zevidiyo yencoko yevidiyo namhlanje unokukhetha amaqabane ngokwezi paramitha zilandelayo:
Zezi paramitha ezicetywayo ukuba zikhethe, njengoko besitsho, abangeneleli ngokwabo. Kwaye undwendwe ngalunye lwevidiyo roulette yokuxoxa inokuthi isebenzise ilungelo lokukhetha okanye ngokungahoyi kubo kwaye iqalise unxibelelwano olusebenzayo lweemvakalelo nolwenyani.
I-9. Kutheni i-roulette ingavinjelwa kwincoko yevidiyo?
Ngaphandle kwento yokuba ividiyo yencoko yevidiyo yenzelwe ukunxibelelana phakathi kwabantu, kuhlala kukho ingozi yokuvalwa. Makhe sibone ukuba yintoni kanye kanye undwendwe olu vimba oluhle kangaka olunokuvinelwa kuyo. Ngokusisiseko, thintela into kubasebenzisi abaphula ezi zithintelo zilandelayo:
ukuthuka kuluphi na uhlobo imbeko kunye nesidima somntu. Ngokubanzi, nasiphi na isithuko sinokukhokelela kwisibhengezo. Ke ngoko, isiseko salo naluphi na unxibelelwano kwesi sixhobo ngentlonipho nokuhloniphana. I-
yentengiso yayo nantoni na. Intengiso ayivunyelwe. Kwaye ilungile loo nto. Emva kwayo yonke loo nto, indawo yayenzelwe ukuba abantu bathethe kwaye batshintshiselane ngezimvo, kwaye bangamameli kwiintengiso zemveliso okanye zenkonzo. I-
inhlamba ngaphandle kwemvume kunye kwaye kwindawo yangasese. I-
ogaxekile ayinqatshelwe. Okwangoku, ndicinga ukuba akukho mntu uza kuyithanda ukuba bayisebenzisa kuphela njengeqonga logaxekile.Ukuvalwa kuyimveliso kwaye kulula. Ukuba umlamli wakho uyaphula kwaye oko kuthintela ekunonwabeleni kunxibelelwano, uya kuhlala ukhalaza ngalo kumlawuli weprojekthi. Izenzo ziya kuthathwa kakhulu, ngokukhawuleza okukhulu. Kuyinyani, ukuba kukho isikhalazo esinye, ke ukuvinjelwa kwangoko akunakulandela. Kodwa isilumkiso siya kufuneka. Ukuba kukho izikhalazo ezininzi ezivela kubantu abohlukeneyo, ke isibhengezo sinokukhawuleza kwaye ngaphandle kwezilumkiso.
I-10. Ngubani onokuthi axhamle kwi-VIDEO ISAHLUKO SESIQHINGA? I-
Kwihlabathi lanamhlanje, uninzi lwabantu luphelele kakhulu kunxibelelwano. Ke, izixhobo ezinje ngevidiyo roulette yengxoxo yevidiyo ayinakuba nje yindlela yokuziyolisa, kodwa nendawo yokuqeqesha. Yenzelwe bani? Kwabaninzi, abantu abaninzi. Umzekelo, lo vimba unokuba luncedo kwaba bantu balandelayo:
yabo baneentloni malunga nokunxibelelana nabantu ebomini bokwenyani. I-
kwabo bafumana kunzima ukwala isicelo. Apha unokufunda indlela yokuqala yokutshintsha ingqalelo komnye umntu. Kodwa oku kunokuba yingozi. Ewe, kubomi benene, awunakuvele ucime umntu kwaye uyeke ukuthetha kwisiqingatha sesibini. I-
yabo bafuna iqabane lomphefumlo okanye bafunda nje ukunxibelelana nabantu besini esahlukileyo. I-
ilula kwabo bathanda kwaye banxibelelana nabantu. I-
Ke, nantoni na enokuthethwa, I-ChattRoulette iya kuhlala iyonwabela kakhulu phakathi kwabantu abaninzi beplanethi yethu entle. Kwaye kulungile. Oku kuthetha ukuba abantu basenomdla kunxibelelwano olonwabisayo ngohlobo lwabo.